Fomba amam-panao Piura | Vaovao momba ny dia
Yunza any Piura
Piura dia iray amin'ireo toerana haleha indrindra ao amin'ny Peru, any amin'ny faritra avaratry ny firenena manoloana ny morontsiraka, ity no tena manintona lehibe indrindra azony eo imason'ny mpizahatany. Na eo aza izany dia aza hadinointsika fa misy karazana pitsopitsony hafa izay mendrika ny hohajaina indrindra amin'io lafiny io, toy ny fomba amam-panao mitranga amin'ny fiainana andavanandron'ny Piurans, izay hikarakara anay amin'ity fotoana ity.
Andao atomboka amin'ny fijerena ny adala, ny dihy mahazatra an'ny faritanin'i Morropón any Piura, izay mahita fahitana mahery vaika amin'ny karazana gipsy, noho izany dia tera-tany tamin'ny vanim-potoana fanjanahantany ary maningana amin'ny fampiasana ny cajon sy ny gitara ho zavamaneno manome gadona azy.
Raha ny momba ny fety, ny zavatra miavaka indrindra amin'ity lohahevitra ity dia ny Taranaky ny mpanjaka, izay ankalazaina nanomboka ny 6 Janoary tao amin'ny distrikan'i Catacaos, izay eo afovoan'ny loko rehetra dia nisy ny fitsidihan'ny Magy alohan'ny nanaovan'i Jesosy zazakely.
Anisan'ireo karazana fety hafa, andao jerena ny 20 feb Fetin'ny Yunces ao amin'ny sisin'ny San Pedro, izay misy fifaninanana mampiala voly eo anelanelan'ny lafiny maitso sy mena, ankoatry ny fitsangatsanganana an-tsambo sy hetsika fety hafa.
Ilaina ihany koa ny manonona ny raharaha momba ny carob, aperitifa matsiro vita amin'ny voan'ny hazo carob. Ao Piura dia raisina ihany koa ho toy ny potion hanitatra ny fiainana.
Photo: Agenda Sechurana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » Fomba amam-panao Piura